Ghana, ɛyɛ ɔman wɔ Abibiman. Kane no na yɛn frɛ ɔman no "Gold Coast" a ɛkyerɛ se Sika Mpoano. Na ɔno ahenkro no din de Nkran (Accra). Ghana nipa beyɛ Opepe Aduonu-baako ne akyire (over 21 million). Ghana yɛ ɔman a ɔno nyaa fawohodie kane wɔ Abibirem nyinaa wɔ Obubuo da a etɔ so Nsia, Afe Apem, Aha Nkron Aduonum Nson (6th Ɔbɛnem 1957). Ɔman panyin a odii ɔman no anim maa yɛn nyaa fawohodie no ne Osagyefoɔ (Dokta)Okunini Kwame Nkrumah.
Nkuro akɛse no bi ɛne Kumasi, Oguaa (Cape Coast), Koforidua, Tema, Tamale, Sekondi (Sakune) ɛne Takorade. Kumasi yɛ Asantifoɔ ahenkuro. Asantihene, Otumifoɔ Osei Tutu a ɔtɔ so Mmienu (II) ɛne Ohenepɔn a sesei ɔte Sika Dwa Kofi (The Golden Stool) so. Ghana wɔ mantam beyɛ du.
Ɔman Panyin a ɔno di Ghana so sesei no din de Nana Addo Dankwa Ekufo Addo. Ghanafoɔ pɛ asomdwoe na wɔn san yɛ nkrofoɔ a wɔn suro Nyame. Ghana yɛ ɔman a yɛn wɔ sika, ɛnam nneɛmapa a yɛn nya firi asaase no mu. Ghanafoɔ aniabue. Sesei yɛn asuaepon (university), ɛyɛ bebree.
Retrieved from "https://tw.bywiki.com/w/index.php?title=Gana&oldid=17458"
This page was last edited on 18 December 2017, at 08:58.